ဝမ်းနည်းမိသော အမြင်လေးတခု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » ၀မ်းနည်းမိသော အမြင်လေးတခု
Posted by Bl4ck_B4dB0y on Sep 19, 2012 in Members | 15 comments
ကျနော် တနေ့ သူငယ်ချင်းဆိုင်သွားရင်း သူငယ်ချင်းက ကျနော့်ကို တခုပြမယ်ဆိုတာနဲ့ဘာများလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော်ကြည့်မိတဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးကို ကိုယ်ဖောက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်ဗျာ အဲဒါဘာလဲဆိုရင် ကောင်မလေးက ကောင်လေးနဲ့ vzoချက်နေတယ်ဗျာ ကောင်မလေးကို
ကောင်လေးက အဲဘယ်လိုပြောရမလဲ ချွတ်ပြခိုင်းတယ်ဗျာ(ရိုင်းသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ ကျနော်ဒီအတိုင်းပဲပြောတတ်လို့ ) အဲဒါ ကောင်မလေးက စကားနားထောင်တယ်ဗျ ချွတ်ပြတယ် ကျနော်တောင်အံ့သြသွားတယ် ဒီလောက်လွယ်လားလို့ဒါပေမယ့်ဗျာ သူမသိတာက သူ့ ကောင်လေးတင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘဲ ကျနော်တို့ ပါ ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သူမသိဘူး
ကျနော်မိန်းကလေးတွေကို အဲဒါသတိပေးချင်တယ်ဗျာ ကျနော်တို့ နေရာမှာ တခြားတယောက်ယောက်သာဆို ဓာတ်ပုံတွေက အွန်လိုင်းပေါ်ပြန့် ပြီဗျာ ကျနော်တို့ ကတော့ ကြည့်ပဲကြည့်တယ် အဲလိုမယုတ်မာချင်တာနဲ့ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တယ် စိတ်ထဲတော့ မကောင်းဘူးဗျာတကယ် ကျနော်သတိပေးချင်ပါတယ် အင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ မမများ သတိရှိပါ ကိုယ့်စက်ကို ဆာဗာထိုင်တဲ့သူက အဲဗားကြည့်လို့ ရနေပါတယ် ပြီးတော့ အဲလိုပြတာကလည်း ယောကျာင်္းလေး ကိုယ့်ကိုအထင်သေးအောင်လုပ်တာနဲ့ တူပါတယ် ကျနော်သာ သူ့ ကောင်လေးနေရာမှာဆို မုချသူ့ ကို အတည်မတွဲဘူးဗျ ကျနော်ပြောတာနည်းနည်းတောင်ရှည်သွားပြီ အမတွေကို သတိပေးချင်တာပါ
အင်တာနက်ဆိုင်မှာထိုင်ရင် ကိုယ့်ကို ဆာဗာမှာထိုင်တဲ့သူက ကြည့်လို့ ရနေတယ်ဆိုတာသတိချပ်ထားစေချင်တယ်ဗျာ
ဘယ်ထဲထည့်ရမှန်းမသိလို့ကျနော်စိတ်ထင်တဲ့အထဲထည့်လိုက်တယ်ဗျာ မှားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျာ
သူတို့ဖါသာ မိုးမမြင်လေမမြင် ချစ်နေကြတော့ ချွတ်ပြယုံတင်မဟုတ်ဘူး
ဒါပေမယ့် ဆိုခဲ့ပြီးသလို ဘာမှမမြင်တော့ဘူးလေ မီေးတာက်နေဒါဂိုးးးး သံဝေဂတော့ ရစရာအကောင်းသား
တော်တော်စိတ်ကောင်းရှိတယ်နော် သာဓုပါကွယ် လူကလေးရယ် သာဓုသာဓု
ဒီလိုလူငယ်တွေက သဘောကောင်းစိတ်တွေရှိကြတာသိရတော့ ကျုပ်တို့
စာအုပ်ထဲပါ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော် သဂျီးအခေါ် အဖနိုင်ငံတော် အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါဒယ်
ညီမလေးတွေအနေနှင့် ဒီလိုမဆင်မခြင်လုပ်မိရင် ချက်ကြီးဆိုဒ်ကိုရောက်သွားနိုင်ဘာဒယ်လို့ဘဲ
ဒါပေမယ့် မစ္စတာချက်ကြီးရဲ့ ဆင်ခြေကတော့ ဟုတ်တုတ်တုတ်
ဒီလိုတင်ပေးမှ နောင်ဆင်ခြင်ရကောင်းမှန်းသိမယ်ဆိုလား ဘာလားသိပါဘူး
ကျနော်လည်း ရှက်တယ်ဗျာ တကယ်လို့ သာ အဲလိုဟာကို ဟိုဘက်က ဘဲက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ဖြန့် ရင် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေသိက္ခာကျစရာ ဖြစ်ရပ်နောက်တခုတိုးတော့မယ်
တနည်းအားဖြင့်.. အဲလို ၀က်ဘ်ကင်န်နဲ့.. ချွတ်ဆို ချွတ်ပြတာမျိုးက.. ယူအက်စ်..နဲ့ဂျပန်မှာ အင်မတန်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ xxx စီးပွားရေးပါ..။
ငွေလိုတဲ့.. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေပါ… အဲလိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ.. မှတ်ပုံတင်ပြီး..customer စောင့်.. customerက.. ချွတ်ဆိုချွတ်တာပဲ..။
ခန္ဓာကိုယ်.. လက်တွေ့ တကယ်မရင်းရတာမို့.. မိန်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်..
တချို့က မျက်နှာကို ကွယ်တယ်.. ။တချီု့က.. မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတယ်..။
ကြားထဲက.. ၀က်ဘ်ဆိုက်က.. ကော်မရှင်စားတယ်ပေါ့..
မြန်မာပြည်ထဲ အင်တာနက်ကောင်းလို့.. အဲလိုဆားဗစ်တွေရောက်လာရင်.. မြန်မာမိန်းကလေးတွေ.. တော်ယုံချွတ်ပြမယ်မထင်မိတော့ဘူး..။ ပိုက်ပိုက်တောင်းမယ်ထင်တယ်.. :hee:
Live XXX Girls Chat Nude | massivecams.com
1000’s of sexy girls are online & waiting for you to come chat now!
webcam best girl – FilesTube Video
Results 1 – 12 – Shorts Big Tits Sexy Ass PORN Hot Girl Hot Big Boobs Hot College Gf Girls Cam Girls … This take some time, not so much, but it is EASY 3,000$+ monthly income
ပွမ်မမ များက အလကားပြနေကြတာဗျာ။
အဲဒီ ချွတ်ပြတဲ့ကောင်မလေးကို ပြောလိုက်ချင်ဒါ…..
“ငါမင်းကို သတ်ချင်ဒယ်”……. :saut:
သြော် ငါ့နှယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ မွန်ကစ်လိုပဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်။
တခါကတော့ နေ့လည်ခင်းကြီးအင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ခေါ်တာကြုံရတယ်။
ဆိုင်ထဲမှာပဲဆူရိုက်ပြီးခေါ်သွားတာ ကျူရှင်ဆိုပြီးဆိုင်ရောက်နေကြတာတဲ့ ကျောင်းသူငယ်ငယ်လေးတွေဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။
မိန်းကလေးတွေကိုယ့် အန္တရာယ် ကိုယ်မြင်တတ်ရှောင်တတ်ကြပါစေ။
ီသူကြီးပြောတာမျိုးအော်ဇီက သတင်းစာတွေထဲမှာကြော်ငြာထားတာ ကော်လံပြည့်ပဲတွေ့ရတယ်. $5/min စသဖြင့်ပေါ့လေ. တချို့ မြန်မာတွေရောက်စလက်တည့်စမ်းတာ ဒေါ်လာ၃၊၄ရာလောက်ဘေလ်တက်သွား တယ်လည်းကြားဖူးတယ်. Black Bad Boy ရေးထားတာမျိုးလည်းကြားဖူးတယ်. ကွန်ပြူတာစသုံးတဲ့ အရွယ်ကလေးနေစပြီး အကျိုးအပြစ်တွေကိုသေချာခေါင်းထဲရိုက်သွင်းပေးထားသင့်တယ်.
ခောတ်မှီနည်းပညာတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြုးတိုးတက်လာသော ဗမာပြည်ပေါ့ဗျာ…။ မီးဆိုတာ သုံးတတ်ရင် မိတ်ဆွေပါ…။ မသုံးတတ်တော့လည်း ကိုယ့်ဖာသာ မီးရှို့သလိုဖြစ်နေတာပေါ့….။ ခက်တာက ပိုနေတဲ့အချိန်တွေအတွက် အကျိုးရှိထိရောက်မဲ့ အွန်လိုင်းပညာပေးတွေ နဲ့ ကိုယ်တတ်သလောက် ကိုယ် အသုံးချနိုင်မဲ့ အွန်လိုင်း အောက်ဆို့စ်တွေ ရှိလာရင်ကောင်းမယ်…။ အွန်လိုင်ပေါ်မှာ ၀င်ငွေရမဲ့ အလုပ်မျိုး တွေ ….။ သူကြီးပြောသလို တစ်မိနစ်ဘယ်လောက်မဟုတ်ပဲလေ…။ အခြား အလုပ်တစ်မျိုးမျိုးပေါ့……။ ချွတ်ပြတာမျိုးကတော့ မြန်မာsexy ဆိုဒ်တွေမှာ ဘုံးပေါလအော ……။ ကြည့်ချင်ရင်ပြော လင့်ပေးမယ်….။
မြန်မာတွေကတော့ မသုံးတတ်တာ များပါတယ်…
ပြောရတာလည်း မောတယ်.. ဖတ်ရတာလည်း မောတယ်….
ဘိုးဘိုးပေ ကို လူခလေးပြောတဲ့ဟာတွေ ပေးပါကွယ့်
ခေတ်ကာလ သားသမီးများ တယ်လဲ ခက်သကိုးး
အော် .. အနိစ္စ ….
မမလေးနဲ့ မမကြီးများက ဖုန်းပါရင်အထင်ကြီး နောက်သမီးရည်းစားဖြစ်၊မမြင်ကွယ်ရာမှာ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချိန်း၊ စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေက ဖုန်းကင်မရာနဲ့ခိုးရိုက် ဟိုလူပြ၊
မနေနိုင်လို့ချိန်းရင် ဖုန်းကို ကိုယ်တိုင်ယူပြီးပါဝါသာပိတ်လိုက်ပေတော့…………..
ဘရိုရေ ယုံချင်ယုံ မယုံပုံပြင်မှတ်ဗျို့ကောင်လေးက တခါပဲပြောပီးတော့ လိုင်းကျသွားတာ ကောင်မလေးက တောင်မှ ကောင်လေးလိုင်းပြန်တတ်လာတော့ ချွတ်ပြရမလားမေးတာဗျို့မိန်းကလေးအိနြေ္ဒဆိုတာ ဒါလားလို့ တောင်မေးရမယ့် ပုံပဲဗျို့ :(